Diiwaangelin - UNHCR Egypt
UNHCR waxa ay dib uga bilaawday hawlaheedii diiwangelinta caadiga ahaa ee ay ka waday Zamalek (Suuriyaanka), Dhismaha Guud (ee jinsiyadaha kale) iyo xafiiska Alexandria waxayna si tartiib tartiib ah u kordhin doontaa awoodeeda Diiwaangelinta.
Xaaladda hadda jirta ee COVID-19 awgeed kaliya codsadayaasha leh ballamaha loo qorsheeyay ayaa lagu adeegi doonaa dhismaha UNHCR.
loo hubiyo hab-socod fudud iyo adeeg tirada ugu badan ee suurtogalka ah ee codsadayaasha iyadoo la tixgelinayo taxaddarrada caafimaad ee socda, UNHCR waxay jeclaan lahayd inay xasuusiso qaxootiga iyo magangelyo-doonka waxyaabaha soo socda:
Kiisaska lala soo xiriiray ama la soo wacay Infoline si aad ballan u sameystaan ​​ayaa loo ogolaan doonaa gudaha xafiisyada UNHCR.
Nasiib darro, ma awoodno inaan ku caawinno ballan hore la’aanteed. Waxaad su’aalahaaga u diri kartaa Infoline ama booqo website-kayaga Caawinta sida lagu sheegay boggaga Facebook wixii macluumaad dheeraad ah.
Si aad uga fogaato waqtiyada sugitaanka ee dheer iyo ciriiriga bannaanka xafiisyada UNHCR, waxaan si adag kuugula talineynaa inaad si adag u ilaaliso ballamaha horay loo dhigay oo aad xafiiska hortiisa joogto 15 daqiiqo ka hor wakhtiga ballanta
Waxaan ku waydiisanaynaa iskaashigaaga naxariista leh si aad u raacdo nidaamka badbaadada, ilaaliso kala fogaanshiyaha dhamaystiran, xidho maaskaro oo aad u hoggaansanto dhammaan tallaabooyinka badbaadada inta lagu jiro booqashadaada xafiiska, si loo hubiyo badbaadada qaxootiga iyo shaqaalaha UNHCR ee kuu adeegaya oo xaddido soo-gaadhistaada wax kasta oo aan loo baahnayn khataraha caafimaadka.
UNHCR waa hay’adda kaliya ee bixisa adeegyada diiwaangelinta iyo dukumentiyada magangelyo-doonka iyo qaxootiga Masar, ka dib shakhsiyaadku waxay heli karaan ogolaanshahooda joogitaanka iyagoo la xiriira maamulka Masar. Ogow in UNHCR aysan hawshan u igman cid saddexaad, dhammaan adeegyaduna waa lacag la’aan.
Codsadayaasha la qorsheeyay waxa UNHCR kala soo xidhiidhi doonta telefoon iyo/ama SMS. Qoraalka SMS-ka waxa ku jira dhammaan faahfaahinta ballanta.
Sideen ku heli karaa ballan diwaangelineed mid ka mid ah Diiwaangelinta Cusub ama dib u cusboonaysiinta kadhkayga?
Laga bilaabo 18ka Febraayo, ballamaha Diiwaangelinta waxaa lagu bixin karaa marinnada soo socda:
UNHCR infoline waxaa la heli karaa laga bilaabo Axadaha ilaa Arbacada: 8:15 subaxnimo ilaa 3 galabnimo
iyo Khamiista: 8:15 subaxnimo ilaa 12 galabnimo
iyo 0225990800 ee Alexandria
Si aad u hesho ballamaha isdiiwaangelinta ee soo socda:
Ballamaha diiwaangelinta cusub
Ballamaha cusboonaysiinta dukumeentiga: ee loogu talagalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka haysta dukumeentiga UNHCR ee dhacay ama ku dhow inuu dhaco 3 bilood gudahood
Ku-darka xubnaha qoyska
Diiwaangelinta dhalashada cusub (ka yar 2 sano)
Ballamaha qof ahaaneed ee xafiisyada UNHCR:
Ballamaha diiwaangelinta, cusboonaysiinta dukumeentiga (qaxootiga iyo magan-gelyo-doonka haysta dukumeentiga UNHCR ee dhacay ama ku dhow inuu dhacayo 3 bilood gudahood), xubin qoyska ka mid ah, diiwaangelinta dhalashada cusub (ka yar 2 sano) balamaha sidoo kale si toos ah ayaa loo soo saari karaa qof ahaan u jooga xafiisyada UNHCR:
Loogu talagalay muwaadiniinta Suuriya:
Xafiiska Zamalek, 5 Michel Lotf Allah, Zamalek, Qaahira
Laga bilaabo Axadda ilaa Khamiista inta u dhaxaysa 08:00 subaxnimo – 02:00 galabnimo.
Loogu talagalay dadka Suudaan, Suudaanta Koonfureed, Ereteriya, Itoobiya, Yemeni, iyo codsadayaasha ka yimid jinsiyadaha kale:
6-da Oktoobar Dhismaha Wayn, 17 Mecca El-Mokarama, Degmada 7aad, 6-da Oktoobar Magaalada
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la idiiwaangaliyo ama dib loo cusbooneysiiyo dukumintigeyga?
UNHCR waxay kordhineysaa awoodeeda si wax looga qabto codsiyada taagan. Waxaan rajeyneynaa inaan yareyno codsiyada taagan sanadka 2021.
Sideen u cusbooneysiin karaa faahfaahinta xiriirkayga, iyo muddo intee le'eg ayey qaadanaysaa in isbeddelku ka muuqdo feylkayga?
Codsiyada cusboonaysiinta xiriirka, fadlan la xiriir Infoline-ka.
Alexandria & Gobollada Xeebta Waqooyi:
Cusboonaysiinta waxay ka muuqataa database-kayaga toddobaad kasta.
Waa maxay tallaabooyinka COVID ee jira?
Badbaadada dadka ay khusayso iyo sidoo kale shaqaalaheena ayaa muhiim noo ah; haddaba, waxaan jira dhowr tallaabooyin oo ka jira dhammaan dhismayaasheena.
Waxaan abuurnay afar boos oo ballamo oo kala duwan maalin gudaheed si loo yareeyo waqtiga sugitaanka ee dadka ay qusayso isla markaana loo xaddido tirada shaqsiyaadka jooga dhismayaasheena waqti go’an.
Meelaheena wax lagu sugo ayaa dib loo naqshadeeyay iyada oo latixgelinayo masaafada jir ahaaneed ee lagama maarmaanka ah; kuraastana lagu calaamadeeyay si waafaqsan
Waxaan sidoo kale dib u naqshadeynay qolalka wareysiga cusub ee shaqaalaha iyo codsaduhu ay ku fadhiistaan ​​qolal kala gooni ah oo ay ku wada xiriiraan daaqada muraayad ah.
Qol kasta waa la jeermis dilaa kadib wareysi kasta waxaana maaskaro iyo jeermis dile loo helayaa dadka ay khusayso.
Waxaa isoo wacay UNHCR oo igu dalbatay wareysi cusboonaysiin dukumiinti ah. Maxaan sameeyaa?
Haddii lagugu casuumo UNHCR si aad u cusboonaysiisato dukumiintiga, fadlan imow xafiiska maalinta iyo waqtiga lagu cadeeyay fariinta xaqiijinta SMS ee aad ka heshay UNHCR. Fadlan la soco in goobta sugitaanka oo kooban awgeed dhismayaasha UNHCR, waxaa lagu ogolaanayaa xafiiskeena kaliya waqtiga loogu talagalay ee la caddeeyay. Kaliya dadka jira 12 iyo ka sareeya waa inay xaadiraan inta lagu gudajiro wareysiga aqoonsiga iyo qaadista cadaynta indhaha. Kuwaa soo xaadiri waaya wareysigooda lama siin doono dukumiinti la cusboonaysiiyay.
Taariikhda wareysigaaga, fadlan hubi in aad keento dhammaan dukumintiyada khuseeya, oo ay ku jiraan:
Kaarka (kaararka) dhacay ee UNHCR ee dhamaan xubnaha kiiskaaga,
Baasaboorada ( haddii laheli karo) ee dhammaan xubnaha kiiskaaga
Dukuminti kasta oo kale oo caddaynaya aqoonsigaaga iyo
Dhammaan dukumintiyada bixiya caddaynta wixii isbeddel ah ee ku saabsan xaaladaada shakhsi ahaaneed ama qosy ee aad jeclaan lahayd in UNHCR diiwaangeliso.
Nidaamka cusbooneysiinta dukumiintiga ma qaadanayo wax ka badan 10 – 15 daqiiqo, iyadoo ay ku kuxirantahay tirada qoyskaaga iyo iskujirka kiiskaaga. Inta lagu jiro howsha cusbooneysiinta dukumiintiga, waxaan sameyn doonaa hubin muuqaal ah oo aan ku xaqiijineyno macluumaadka jismi ahaaneed.
Fadlan la soco inaan si dhakhso leh uga shaqeyn karno cusbooneysiinta dukumiintiga kaliya haddii dukumiintiyada oo dhan la heli karo, wayna adkaan doontaa in laga howlgalo kiiskaaga haddii ay wax maqan yihiin.
Fadlan sidoo kale xusuusnow in aad u hogaansanto dhammaan taxaddarrada la hirgeliyey si loo yareeyo halista sii faafidda fayraska. Markii aad ku dhex jirto gudaha xarunta UNHCR, waxaa waajib kugu ah inaad xirato maaskaro oo aad dadka kale ka fogaato; inaad sida ugu wanaagsan u ilaaliso naftaada iyo dadka kaleba, waxaan si xoog leh kugula talineynaa in aad xirato maaskaro sidoo kale markaad usoo socoto xafiiska iyo dhismaha UNHCRta horteedaba.
Waxaa isoo wacay hay’ada UNHCR oo igu casuuntay wareysi Diiwaangelin cusub ah. Maxaan sameeyaa?
Haddii lagugu martiqaado UNHCR si loo diwaangeliyo cusub, fadlan la imow xafiiska adiga iyo dhammaan xubnaha kiiskaaga maalintii iyo saacadda lagu tilmaamay SMS-ka xaqiijinta ee aad ka heshay UNHCR.
Fadlan lasoco, in waqtiga sugitaanka ee dhismaha UNHCR oo xadidan darteed, waxaa lagu qaabilayaa xafiiskeena kaliya waqtiga loogu cadeeyay. Dhammaan xubnaha qoyska waxaa looga baahan yahay inay goobjoog ahaadaan inta lagu guda jiro wareysiyada. Kuwa aan qaybgelin waraysiga, lama diiwaangelin doono.
Taariikhda wareysigaaga, fadlan hubi inaad keento dhammaan dukumintiyada khuseeya, oo ay ku jiraan, kuwa ugu muhiimsan:
Haddii la heli karo, baasaboorro dalka ee dhammaan xubnaha kiiskaaga,
Haddii la heli karo, wixii dukumiintiyo kale ah oo caddaynaya aqoonsigaaga iyo / ama xaaladdaada shaqsiyeed ama qoys.
Wareysiga wuxuu soconayaa 30 ilaa 45 daqiiqo, iyadoo ay ku xirantahay tirada qoyskaaga iyo siduu u adagyahay kiiskaaga. Qabashada warbixintaada muhiimka ah iyo sida laguula soo xiriirayo ka sokow waxaan qaadeynaa sawir iyo waliba macluumaadka biometric (sawirka indhaha) inta lagu guda jiro wareysigaaga.
Fadlan sidoo kale xusuusnow in aad u hogaansanto dhammaan taxaddarrada la hirgeliyey si loo yareeyo halista sii faafidda fayraska Markii aad ku dhex jirto gudaha xarunta UNHCR, waxaa waajib kugu ah inaad xirato maaskaro oo aad dadka kale ka fogaan karto; inaad sida ugu fiican u ilaaliso naftaada iyo dadka kaleba, waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad xirato maaskaro sidoo kale markaad u socoto xafiiska iyo dhismaha UNHCRta horteeda.
Waa maxay muddada uu dhacayo kaarka magangelyo-doonka iyo kaarka qaxootigu?
Shahaadada magangalyo-doonka (shahaadada cad) waxay shaqeyneysaa 6 bilood, Kaarka isdiiwaangalinta magangalyo-doonka (“Kaarka Jaalaha ah”) wuxuu shaqeynayaa 18 bilood, Halka kaarka diiwaangelinta qaxootigu (“Kaarka buluuga ah”) uu shaqeynayo 3 sano.
Haddii ay dhacdo in aniga ama qof ka mid ah qoyska ama saaxiib aan la kulanno dhibaato badbaadin oo kaarka UN-ka oo dhacay awgeed ama la xiro, sidee UNHCR u caawin kartaa?
Qaxootiga iyo magangalyo-doonka ee la kulma wax kasta oo sharci ah waxaa lagu dhiirigelinayaa inay toos ula soo xiriiraan UNHCR iyaga oo adeegsanaya emayl ([email protected]) ama lambarada khadka telefoonka:
Qaahira oo dhan: 0227390400
Askanderiya iyo Gobollada Xeebta Wuqooyi:: 0225990800
Dhibaatooyinka ilaalinta ee la xidhiidha dukumeentiyada UNHCR ee dhacay, qaybta sharciga ayaa la socon doonta kiis-kiis, si ay gacan uga geysato xallinta arrinta. Intaa waxaa dheer, UNHCR waxay leedahay laba la-hawlgalayaasheeda fulinta sharciga ah kuwaas oo diyaar u ah inay ka taageeraan qaxootiga arrin kasta oo sharci ah:
Jamciyadda Masaarida ee Xuquuqda Qaxootiga: 01272020938 / 0225751118
Midowga Qareenada : 01154526171